Illaahnimada ma Baybalka Ciisaa?
Su’aal: Illaahnimada ma Baybalka Ciisaa?
Jawaab: Intaa waxaa dheer sheegashada gaarka ah ee Ciise ee ku saabsan Nafsadiisa, Xirtiisa sidoo kale way qirteen illaahnimada Masiixi. Waxay sheegteen inuu Ciise lahaa xaquuqda lagu cafinayo dambiyada—mararka qaar kaliya Illaah ayaa sameyn karo—sida uu Illaah yahay cida ay xumeysay dambiga (Falimaha Rasuullada 5:31; Kolosay 3:13; Sabuurradii 130:4; Yeremyaah 31:34). Sida dhow ee sheegashada ugu dambeyso, Ciise wuxuu sidoo kale dhahay inuu yahay qofka “xukumayo noolaha iyo dadka dhintay” (2 Timoteyos 4:1). Tohomas wuxuu ku ooyay Ciise, “Illaaheyga iyo Illaaheyga!” (Yooxanaa 20:28). Bawlos wuxuu ugu yeeray Ciise “Illaah wanaagsan oo Badbaadiye ah” (Tiitos 2:13) oo tilmaamay in ka hor Dhalashadiisa labaad Ciise wuxuu u jiray “qaabka Illaah” (Filiboy 2:5-8). Illaah Aabaha wuxuu ka yiri Ciise: “Cashrigaaga, O Illaahayow, wuxuu jirayaa weligeed iyo weligeed” (Cibraaniyada 1:8). Yooxanaa wuxuu sheegay in “bilowga ay aheyd Erayga, iyo Erayga wuxuu la jiray Illaah, iyo Erayga [Ciise] wuxuu ahaa Illaah” (Yooxanaa 1:1). Tusaalooyinka Qoraalada baraa illaahnimada Masiixi way badanyihiin (fiiri Muujintii 1:17; 2:8; 22:13; 1 Korintos 10:4; 1 Butros 2:6-8; Sabuurradii 18:2; 95:1; 1 Butros 5:4; Cibraaniyada 13:20), laakin xitaa mid ka mid ah kuwaa way ku filantahay inay muujiso in Masiixi loo tixgeliyay inuu Illaah u yahay Raacayaashiisa.
Ciise wuxuu sidoo kale siiyay ciwaano gaar ku ah YHWH (magaca rasmiga ah ee Illaah) ee ku jiraa Baybalka Hore. Ciwaanka Baybalka Hore “yereeyaha” (Sabuurradii 130:7; Hosea 13:14) waxaa lagu soo isticmaalaa Ciise Baybalka Cusub (Tiitos 2:13; Muujintii 5:9). Ciise waxaa loogu yeeray Immanuel—“Illaah ayaa nala jiraa”—ee Matayos 1. Gudaha Zechariah 12:10, waa YHWH ee dhahaa, “Aniga ayay i eegayaan, cida ay dalooliyeen.” Laakin Baybaylka Cusub ayaa ku quseeyayo midaan ee dilka Ciise’ (Yooxanaa 19:37; Muujintii 1:7). Haddii uu yahay YHWH ka la dalooliyay oo kor eegay, iyo Ciise wuxuu ahaa midka la dalooliyayoo korna eegay, kadib Ciise waa YHWH. Bawlos wuxuu fasirayaa Ishacyaah 45:22-23 sida isaga oo ku codsanayo Ciise Filiboy 2:10-11. Waxaa intaas dheer, Ciise’ magaciisa waxaa lala isticmaalaa u tukashada Illaahey “Naxariis iyo nabadgalyo korkaaga ha ahaatee ee ka timid Illaah Aabahaeena iyo Illaaha Ciise Masiixi” (Galatiya 1:3; Efesos 1:2). Tani waxay noqoneysaa cay haddii Masiixi uusan aheyn illaah. Magaca Ciise wuxuu u muuqdaa Illaa ku dhax jiro Ciise ee lagu amray inuu daahiriyo “magaca [kaliya] ee Aabaha iyo Wiilka iyo Ruuxa Qaduuska” (Matayos 28:19; fiiri sidoo kale 2 Korintos 13:14).
Tallaabooyinka lagu gaari karo kaliya Illaah oo ku tixgeliyo Ciise. Ciise kama soo kicin kaliya dhimashada (Yooxanaa 5:21; 11:38-44) oo cafiyay dambiyada (Falimaha Rasuullada 5:31; 13:38), Wuxuu aasaasay oo joogteeyay caalamka (Yooxanaa 1:2; Kolosay 1:16-17). Tani wxaay noqotay xittaa inay cadaato markii mid tixgeliyo YHWH waxaa sidaas yiri wuxuu ahaa kaligiisa inta lagu jiray abuurida (Ishacyaah 44:24). Intaa waxaa dheer, haysashada Masiixi waxay sifeysaa in kaliya illaahnimada ay lahaan karto: nolaanshaha weligeed ah (Yooxanaa 8:58), xaadirka illaah (Matayos 18:20, 28:20), ogaanshaha wax walba (Matayos 16:21), iyo awooda (Yooxanaa 11:38-44).
Hadeer, waa hal shey ee lagu sheegaynayo inuu Illaah yahay ama qiyaano inuu qof aamino inay run tahay, iyo wax kale oo gabi ahaanba ku cadeynayo inay sidaas ahaato. Ciise wuxuu siiyay mucjiso badan sida cadeynta sheegashadiisa illaahnimada. Qaar ka mid ah mucjisooyinka Ciise waxaa ku jiro biyo u badelida qamri (Yooxanaa 2:7), ku socoshada biyaha (Matayos 14:25), badinta sheeyada jirka (Yooxanaa 6:11), daaweynta camoolayaasha (Yooxanaa 9:7), curyaannada (Markos 2:3), iyo kuwa jiran (Matayos 9:35; Markos 1:40-42), iyo xitaa ka soo kicinta dadka dhimashada (Yooxanaa 11:43-44; Luukos 7:11-15; Markos 5:35). Waxaa intaa dheer, Masiixi naftiisa wuxuu ka soo kacay dhimashada. Markii laga fogeeyo waxa loo yaqaan dhimashada iyo soo kicinta caadooyinka illaahyada jaahilka, ma jiraan wax sida soo noolaanshaha si dhab ah u sheegtay ee diimaha kale, oo ma jiraan sheegasho kale sida badan ee xaqiijinta qoraalka dheeraadka ah.
Waxaa jiro ugu yaraan labo iyo toban taariiq ee ku saabsan Ciise oo xitaa qoraalada dadka aanan Kirishtaanka aheyn ay qirayaan:
1. Ciise wuxuu ku dhintay istilaabka.
2. Waa la duugay.
3. Dhimashadiisa waxay ku sababtay xirta inay quustaan oo rajo beelaan.
4. Xabaasha Ciise waa la ogaaday (ama waxaa la sheegtay in la ogaaday) inay eber tahay maalmo kadib.
5. Xirta waxay aaminsanyihiin inay la kulmeen muuqaalada Ciisaha soo kacay.
6. Midaan kadib, xirta waxaa laga wareejiyay shakiyayaal ee aaminayaasha geesiga ah.
7. Fariintaan waxay aheyd bartamaha wacdiyada ee Kaniisada hore.
8. Fariintaan waxaa lagu wacdiyay Jerusalem.
9. Sida ay sababtay wacdiyadaan, Kaniisada way dhalatay oo way kortay.
10. Maalinta soo noolaanshaha, Axada, waxaa badelay Sabtida (Sabtida) sida maalinta koowaad ee aaminaada.
11. James, shakiga, waa la badelay marka isagaba uu aaminsanyahay inuu arkay Ciisaha soo noolaaday.
12. Bawlos, cadowga Kirishtaanka, waxaa lagu badelay waayaa aragnimada uu aaminsanyahay inay tahay muuqaalka Ciisaha soo noolaaday.
Xitaa haddii qof uu ahaa sheyga liiskaan gaarka ah, kaliya dhoor ayaa u baahan inay cadeyso soo noolaanshaha oo aasaasto baybalka: Dhimashada Ciise', duugta, soo noolaanshaha, iyo muuqaalada (1 Korintos 15:1-5). Iyada oo jiri karto qaar ka mid ah aragtiyada lagu sharaxayo hal ama labo ee xaqiiqaha kore, kaliya soo noo laanshaha ayaa sharaxo oo u xisaabiyo iyaga dhammaan. Dhaleeceynta waxay qirtay in xirta ay sheegteen inay arkeen soo noolaanshaha Ciise. Midkood been ma sheego ama malaawaalada waxay ka badeli karaan dadka qaabka soo noolaanshaha sameeyo. Marka koowaad, maxay helayaan inay ka helaan? Kirishtaannimada ma aheyn mid caan ah iyo oo markiiba maysan u sameynin wax lacag ah. Mida labaad, beenlayaasha ma sameeyaan shahiid wanaagsan. Ma jiraan sharaxaad ka wanaagsan soo noolaanshaha rabitaanka xirta ee ku dhintay dhimasho xun ee aaminaadooda ah. Haa, dad badan wuxuu ku dhintaan been ay u moodaan inay runtahay, laakin dadka been kama sheegaan waxa ay ogyihiin inaysan run aheyn.
Gaba gabada, Masiixi wuxuu sheegtay inuu ahaa YHWH, inuu ahaa ilaah (ma ahan kaliya “illaah” laakin Illaah runta ah); Raacayaashiisa (Yahuuda ee ku argagaxeen sannamka) way Aamineen oo waxay ku tilmaameen sida Illaah. Masiixi wuu ansixiyay Sheegashadiisa ee illaahnimada ee dhinaca mucjisooyina, oo ay ku jiraan aduunka-badelayo soo noolaanshaha. Ma jiraan fikrado kale ee sharaxi karo xaqiiiqdaan. Haa, illaahnimada Masiixi waa baybalka.